Tag: mustaqbalka | Martech Zone
7 Cashar Oo Tafaariiq Loogu Talo Galay Casrigii E-Ganacsiga
E-Ganacsiga ayaa la wareegaya warshadaha tafaariiqda daqiiqad. Waxay ka dhigeysaa mid aad u dhib badan in la sii wado dukaamada lebenka iyo hoobiyeyaasha. Dukaamada lebenka-iyo-madaafiicda, kuma xirna keydinta alaabada iyo maaraynta xisaabaadka iyo iibka. Haddii aad maamusho dukaan jireed, markaa waxaad u baahan tahay inaad u gudubto heerka ku xiga. Sii dukaamada sabab qasab ah oo ay ku qaataan waqtigooda si ay ugu soo degaan dukaankaaga. 1. Bixi Khibrad, Maahan Keliya Alaab
Mustaqbalku Maaha Shaqo La’aan Weligana Ma Noqon
Talaado, Agoosto 2, 2016 Douglas Karr
Dhibaatooyinka ku saabsan mustaqbalka sirdoonka farsamada, robotikada, iyo otomaatiga ayaa runtii u baahan in la joojiyo. Kacaan kasta oo warshadeed iyo farsamo oo taariikhda ah wuxuu aadanaha u furay fursado aan xadidnayn oo lagu dabaqo kartidooda iyo hal-abuurkooda. Maaha in shaqooyinka qaarkood aysan lumin - dabcan way baaba'aan. Laakiin shaqooyinkaas waxaa beddelay shaqooyin cusub. Markaan eego xafiiskayga maanta oo aan dib u eego shaqadeena, waa wax cusub! Waxaan ka daawadaa kuna soo bandhigaa barnaamijkeena AppleTV,
Jimcaha, Sebtember 26, 2014 Jimcaha, Sebtember 26, 2014 Scott Vaughan
Waqtiga xaadirka iyo mustaqbalka Teknolojiyada Suuq geynta ayaa laga dooday laguna qabtay shirkii daah furka ee Martech ee Boston. Waxay ahayd dhacdo la iibiyay oo kulmisay hoggaamiyeyaal feker kala duwan oo dunida Martech ah. Hore, waxaan fursad u helay inaan la xiriiro gudoomiyaha shirka, Scott Brinker, si aan ugala hadlo horumarka warshadaha iyo sida doorka Madaxa Teknolojiyada Suuq geynta uu u noqday doorka ay tahay inuu lahaado ururada suuqgeynta adduunka oo dhan. Wadahadalkeenna, Scott
Tubta Mustaqbalka Suuqgeynta
Axad, Juun 13, 2014 Isniin, Maarso 16, 2015 Douglas Karr
Qodbay. Taasi waa waxa aan u maleynayay isla markii aan arkay sawirka hoose ee warbixinta MediaPlant oo ay maalgelisay Microsoft, Dollar, Bits, iyo Atoms: Tubta Mustaqbalka Suuqgeynta. Waa fikrad si fiican looga fikiray oo wax ku ool ah oo ku saabsan sida tikniyoolajiyaddu isu beddeleyso si ay awood ugu hesho xeelado suuq-geyn wax ku ool ah. Hal shax ayaa istaagay sidii aan shirkadaha uga caawin jirnay horumarinta istiraatiijiyaddooda suuq-geynta ee internetka sidaa darteed waxaan ku soo daray halkan hoose. Suuqgeyntu waxay kujirtaa xaalad kala guur ah,
Sidee Teknoolojiyaddu u qaabeyneysaa mustaqbalka suuqgeynta
Jimce, Maarso 14, 2014 Douglas Karr
Way cadahay in mustaqbalka suuqgeynta ay ku jirto codsiyada moobiilka, waxaana jira qol aad u fara badan oo qol lagu koriyo; hadda, kaliya 46% ee shirkadaha ayaa leh codsiyada moobaylka. Isgaarsiinta mobilada dusheeda, Xogta Weyn waxay siineysaa fursad kale kobcin, laakiin 71% ee CMO-yada ayaan diyaar u aheyn qarxinta xogta. Mobilada ayaa qaabeynaya mustaqbalka suuqgeynta 46% shirkadaha hada heysta noocyada mobilada ee boggooda iyo 30% ayaa qorsheynaya inay raacaan